Talata 10 Desambra 2019. – FJKM
Talata 10 Desambra 2019.
Fandalinana ny Filazantsara araka an’i MATIO
Ny Filazantsara araka an’i Matio no manafoana ny fahanginana nandritra ny efa-jato taona eo anelanelan’ny Testamenta roa ka maneho ny fifampitohizan’ny faminaniana sy ny fahatanterahany ao amin’i Jesoa Kristy . Ity fitanisana ny firazanan’i Jesoa dia ahitantsika ireto :
1-I Jesoa Kristy no ilay hery manadio sy manafaka (and1-11)
Ny zava-dehibe eto dia izao : nandresy ny sakana Andriamanitra satria na lahy na vavy , eny fa na izay efa voaozona toa an’i Jekonia aza (Jer 22.30) dia azo raisina . Endrika famoahana avy amin’ny fahababoana ho tena fanafahana sy fanohizana ny taranaka vaovao ho amin’ny maha- Mpanjaka Azy izao . Porofon’ny famonjena ho entiny ho an’ny olona rehetra izany .
2-I Jesoa Kristy : Ivon’ny tantara (and12-17)
Ny fitohizana avy eo amin’i Davida ka hatramin’i Josefa ary ny fampidirana an’i Maria izay vehivavy mpandray anjara farany dia ahitantsika an’ Andriamanitra mitsofoka ao amin’ny tantara ka mitondra ho amin’ny tanjona vaovao dia ny fahatongavan’i Jesoa ho teny farany ao amin’ny taranaka taloha sy fidirana ho amin’ny taranaka vaovao .